मनोरञ्जन | मनोरञ्जन – BSC Nepal
०५ जेठ ,- शुक्रबारदेखि देशभर प्रदर्शनमा आएको सिनेमा जात्रै जात्राले देशैभर आक्रामक कारोबार गरिरहेको छ । सिंगलको तुलनामा मल्टिप्लेक्समा सिनेमाको कारोबार अक्रामक छ । शुक्रबारदेखि नै आक्रामक कारोबार गरिरहेको सिनेमाको शनिबार काठमाण्डौका सिभिल, जय नेपाल, कुमारी, बिग मुभिज, छाया सेन्टर, ललितपुरको लबिम मललगायतका हलहरुमा दर्शकको चाप ९५ देखि १०० प्रतिशत रह्यो । काठमाण्डौ बाहिरका चितवन, […]
स्थानीय गायक सुजन आङदेम्बे र गायिका सुनिता थेगिमको आवाजमा सजिएको “सम्झेको बेलमा” बोलको गित सार्वजनिक भएको छ । गितको फिचरीङ पनि स्वयंम सुजन आङदेम्बे र सुनिता थेगिमले गरेका छन् ।
२०७६ जेठ ०४ को राशिफल
मेष– एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ । पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ । काम बिग्रने डरले सताउन सक्छ । वृष– अरूका विषयमा चासो लिँदा विवादमा परिनेछ । असावधानीले धन खर्च हुन सक्छ । मिथुन– आफ्ना विषयवस्तुमा अरूले अधिकार जमाउन सक्छन् । नगरेका गल्तीको सजाय भोग्नुपर्ला । सरकारी कडिकडाउको सिकार भइनेछ । कर्कट– विद्यामा कमजोरी र लेनदेनमा विवाद […]
मिती २०७६ जेठ ०३ को राशिफल
मेष– आर्थिक पक्ष सुदृढ बन्नेछ । न्यायिक, कानुनी वा प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा विजय प्राप्त हुनेछ । वृष– हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण समय छ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै अध्ययन—अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगति होला । मिथुन– दुर्गमस्थान र टाढाको यात्रा सम्भावना छ तर अनावश्यक यात्राबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ । कर्कट– दोधारको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । पारिवारिक सहयोग प्राप्त हुनेछ […]
फिदिममा ‘हत्केलामा पृथ्वी लिएर उभिएको मान्छे’
पाँचथर, ३१ बैशाख सोल्टीसाब ! बैँस पनि सकिजाने पैसा जस्तो रहेछ आउछु पनि नभनि तपाईको सम्झना आयो त्यही सम्झनामा अल्झिएर रात छर्लैङगै पारे अनिदो बसेर कस्सम, हजुरकै सम्झनामा विताए रात नेपाली कविता क्षेत्रमा बेग्लै पहिचान बनाएकि कवि विमला तुम्खेवाले यो कविता बाचन गर्दै फिदिममा साहित्यकार र सहित्यमा रुचि भएकाले बेजोडले ताली बजाए । कवि विमलाको […]
समर्पण र समर्पण
यशोदा राई कसरी कहाँबाट शुरु गरुँ ? कि, उहाँ को हो ? र कस्तो हुनुहुन्थ्यो ? भनेर । धेरै व्यक्तिहरुको जीवनी पढियो । उहाँ एस्तो हुनुहुन्थ्यो । एस्तो कार्यमा, यति समय यसरी संघर्ष गरे भनेर । तर फिदिम नगरपालिका – ३ (लालीखर्क) बस्ने श्री गोपाल राई साँच्चिकै यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के कस्ता कार्यमा ? […]
अनुष्का श्रेष्ठ बनिन् ‘मिस नेपाल वर्ल्ड २०१९’
२७ बैशाख ,- यो वर्षको मिस नेपाल वल्र्डको उपाधि अनुष्का श्रेष्ठले जित्न सफल भएकी छिन् । बिहीबार भएको फाइनल चरणमा २४ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै अनुष्का मिस नेपालको उपाधि जितेकी हुन् । ‘अधिकार र कर्तव्यमा कुन बढी जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्कृष्ट जवाफ दिएर अनुष्काले मिस नेपालको उपाधि जितेकी हुन् । उनले अब मिस वर्ल्डमा सहभागिता जनाउन […]
अनिल तिखत्री तिमी गयौ म त केवल आउने बाटो हेरिरहें जहाँ पाइला टेक्यौ तिमीले त्यही माटो हेरिरहें छुरा हानी गयौ मेरो कोमल मनको किनारमा देब्रे छाती भित्र पट्टी यो घाउको खाटो हेरिरहें अर्को जन्म लिई आउला तिमीलाई माया गर्न यो जनममा तिम्रो तस्बिर तिम्रै साटो हेरिरहें माया गर्यौ घृणा गर्यौ एक्लो बनाई छोडी गयौ टुक्रिएको […]
र यहाँसम्म आइपुग्दा
सगुन सुसारा केही उत्साह र चाहाना:- म आफुलाई कुनै काम गर्न मन लागेपछि निकै चाखका साथ गर्न मन पराउँछु । त्यसका लागि सहयात्रीहरुको सहयोग र साथ पनि अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । यदि एकआपसमा त्यो भएन भने झन उल्टै खेद्न मन पनि लाग्छ । सायद यो मेरो नेतृत्वको कमजोरी होला ? या त मसँग नेतृत्व गर्ने […]
१९ बैशाख,- थाइल्याण्डका राजा महा वजिरालंगकर्नले बुधबार विवाह गरेका छन् । राजा वजिरालंगकर्णले उनकै सुरक्षामा खटिएकी एक महिलासँग विवाह गरेका हुन् । विवाहपछि उनलाई रानी सुथिडा नाम दिइएको छ । शनिबार राजा महा वजिरालंगकर्णको राज्याभिषेक हुँदैछ । यही समारोहलाई लिएर राजाले विवाह गरेको विश्वास गरिएको छ । बुधबार भएको विवाह समारोहबाट सबैजना अचम्ममा परेका छन् […]